Jabuuti iyo Marocco oo Gaaray Heshiisyo Muhiim ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Jabuuti iyo Marocco oo Gaaray Heshiisyo Muhiim ah
Jabuuti iyo Marocco oo Gaaray Heshiisyo Muhiim ah
Rabad-(SONNA) Labada dal Jabuuti iyo Marocco ayaa kala saxiixday heshiisyo dhanka iskaashiga siyaasadda iyo booqashooyinka.
Dhinaca Dowladda Jabuti waxaa heshiiskaasi u saxiixay Wasiirka arrimaha Dibadda, ahna afhayeenka rasmiga ah ee Xukuumadda jabuti Mahmud Ali Yuusuf oo wafdi uu hogaaminayo haatan booqasho rasmi ah ku jooga magalada Rabad ee caasimadda dalka Marocoo.
Dhinaca Dowladda Marocco waxaa iyana heshiiskaasi u saxiixay wasiirka Arrimaha dibadda ee dalkaasi Nasir Boridha,waxaana qodobada heshiiskaasi ka mid ay inay labada dowladood ay mar walba ka wada arrinsadaan arrimaha siyaasadda iyo dhinaca dalka ku galka fiisaha oo wax shuruud ah ku xirneyn iyo waliba dhanka horumarinta dibolomaasiyadda.
Telefishinka Jabuuti ayaa baahiyay inay laba wasiir ay ka wada munaaqashoodeen arrimo badan ay ka mid yihiin arrimaha aminiga, dhaqaalaha, Ganacsiga iyo ka hortagga xadgudbiyada argagixisada.
Wasiirka arrimaha Dibada Jabuti Mahmud Ali Yusuf ayaa ka codsaday Dowladda Marocco inay safaarad ka furato magaalada Jabuti ee xarunta dalka jabuti, taasoo dowr weyn ka qaadanaysa sii xoojinta cilaaqaadka labada dal ee walaalaha ah.
Wasiirka arrimaha Dibadda ee marocco ayaa isna soo dhaweeyay codsigaasi wuxuuna sheegay in labada wadan oo iminka u furmay boq cusub ee xagga horumarinta cilaaqaadka ah.
Previous articleKulan looga hadlayay baahiyaha ka jira Hirshabeelle oo lagu soo gabagabeeyay Jowhar
Next articleGuddoomiyaha G/banaadir oo soo xiray Barnaamijka Aminiga iyo hormarinta Caasimadda